12 Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa
(Emelitere ikpeazụ On: 24/12/2021)
Site na ọmarịcha ihe nkiri oge ochie n'okpuru kpakpando gaa n'ụlọ nzukọ dị ịtụnanya ma mara mma, ndị a 12 ebe egwu kachasị mma n'ụwa dị mma ma ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ị nweta egwu egwu kachasị mma. Shanghai, Berlin, London, na aretali bụ nanị ole na ole n'ime ebe kachasị mma iji nwee obi ụtọ na egwu egwu egwu na-esote.
1. Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa: Allọ Nzukọ Royal Albert Na London
Meghere site na otu n'ime ụlọ ndị kacha ewu ewu na ụwa, Nwanyị Victoria, Royallọ Royal Royal nke dị na London, bụ otu n’ime ebe egwu egwu ama ama n’ụwa niile. Ka ị na-abanye, ị ga-ekwenye ozugbo na ọ bụ eze. Site na ndozi ka ikuku mgbe ọkụ na-apụ, a egwu ebe a ga-enye gị goosebumps.
ebe ọ bụ na 1871 egwu ndi egwu di iche-iche, gaa Royal Albert Hall maka 365 ụbọchị. Ya mere, ma ị bụ onye jazz, nkume, ma ọ bụ onye na-agba egwu oge gboo, egwu egwu egwu na Royal Albert Hall bụ ahụmịhe ị na-achọghị ịhapụ mgbe London. Royallọ Royal Albert dị na South Kensington, ọ dịkwa mfe ịnweta site na tube.
2. The O2 Arena Na London
Ebe egwu kacha mma nke abụọ n'ime anyị 12 ebe egwu kacha mma n'ụwa bụ O2 Arena na London. Ọ bụ otu n'ime ebe egwu egwu dị egwu na Europe, na ụwa, nwere ọnụ ụlọ maka a 20,000 ndị na-ege ntị. Ọzọkwa, na 2008 ọ karịrịdị tiketi nke Madison Square Garden.
Onyeisi, Cirque Du Soleil, Alicia Igodo, na onyinye nturu ugo, bụ naanị ole na ole n'ime egwu egwu ị nwere ike ịnụ ụtọ na O2 Arena. Ga-aga njem na mpụga etiti London, Gaa Greenwich, mana maka ahụmịhe egwu kachasị mma, ọ bụ kpam kpam ruru hassle.
3. Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa: Musikverein Na Vienna, Austria
Deere dị ka igbe egwu zuru oke, ụkpụrụ nke ịma mma, na Wiener Musikverein, ma ọ bụ mkpakọrịta egwu, bụ kacha kacha kpochapụwo music ebe mgbakọ na Europe. Tolọ na Viennese philharmonics, Ezubere ụlọ egwu egwu na kpochapụ Ụdị ụlọ nsọ Europe, ya na Frescos nke Apollo n ’uko ụlọ.
364 ụbọchị n'afọ, ndị hụrụ egwu si gburugburu ụwa, gaa Vienna maka ahụmịhe egwu na-atọ ụtọ ma na-agaghị echefu echefu. N'ihi ije, ịkpa ntị, music, ebe, na ikuku, na Musikverein bụ na elu nke 12 ebe egwu kacha mma n'ụwa.
4. Arena Verona Na Italia
The 12 ebe egwu kachasị mma n'ụwa ga-egosi ebe kachasị mma maka arụmọrụ opera. E wuru Verona Arena na narị afọ mbụ, ma taa ị ga-ahụ ya ka ọ kwụrụ otu ebe, na nnabata opera Fans si n'akụkụ ụwa niile.
Verona Arena bụ oghere ghere oghe Amphitheater, Mgbidi ya ga-agwakwa gị akụkọ banyere ndị na-alụ ọgụ ọnwụ, na-agbakwụnye okwu nkwu. Eldị elliptical na-etinye ogige Verona dị ka otu n'ime ebe kachasị mma na fortali maka egwu egwu egwu. Ihe omuma, ebe a na-eme mgbakọ na-enwu n’abalị, eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe egwu egwu pụrụ iche na Europe.
5. Centerlọ Ọrụ Mba Na-ahụ Maka Artsrụ Ọrụ Na Beijing, China
Akwa, oge a art ibe, mba center maka n'ịrụ nkà bụ otu n'ime ihe ndị kasị adọrọ mmasị ụlọ ke Beijing. Na mgbakwunye na ụdị pụrụ iche nke etiti ahụ, e nwere ọdọ mmiri aka ya gburugburu.
Centerlọ ọrụ mba maka ịme nka bụ ebe kachasị mma iji nwee opera na egwu na China. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ omenala Chinese music arụmọrụ, mgbe ahụ ụlọ nzukọ egwu bụ ebe kachasị mma.
6. Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa: Arena Of Nimes Na France
Ndị kasị ochie Roman egwuregwu na ọgbọ egwuregwu nwere ike nọrọ n'ụlọ ruo ihe ịrịba ama nke 24,000 ndị hụrụ egwu. Ebe a egwu dị egwu na-adọta ọtụtụ puku ndị ọbịa kwa afọ, nye ụfọdụ n'ime egwu egwu uche na France.
Site na ịgba agba agba nke oge a na Hans Zimmer, ihe omume egwu na Arena nke Nimes agaghị echefu echefu. Na mgbidi na ọkụ na yi ọkụ n'abalị, usoro ụda ndị a – A egwu ebe a bụ n'ezie electrifying.
Paris na Nimes nwere ụgbọ oloko
Montpellier na Nimes nwere ụgbọ oloko
Marseille na Nimes nwere ụgbọ oloko
Ọ dị mma na Nimes nwere ụgbọ oloko
7. Oke ohia na Berlin
Odude ke Olympic Park na nnọkọ oriri na ọ cityụ cityụ obodo Berlin, na Waldbuhne bụ ihe n'èzí-amphitheater. Ọla Pearl Jam, ihe Berlin philharmonic, na Taylor Swift bụ naanị ole na ole n'ime ndị na-ese ihe na-enye egwu na nnukwu ebe mgbakọ.
Emebere Waldbuhne maka egwuregwu Olympic na 1934, mana kemgbe ahụ abụrụla otu n’ime 12 ebe egwu kacha mma na Germany, na ụwa. Nwere ike ịbụ otu n'ime obi ụtọ 20,000 ndị mmadụ na-aga egwu egwu egwu, gbara ọhịa. Lọ egwu a dị egwu ejiriwo ọtụtụ egwu egwu mee ọtụtụ afọ, yabụ ị nwere ike ịbụ akụkụ nke akụkọ ntolite egwu na egwu na-esote ọhụụ na Germany.
Anyị 12 ndepụta egwu egwu kacha mma agaghị ezu oke na klọb egwu egwu dị na China. Yuyintang dị na Shanghai adịghị ka nnukwu ebe egwu ndị ọzọ dị n'ụwa, mana ọ bụ otu n’ime ihe kachasị mma.
Ọ chiri anya, na otu-nke-a-ụdị, Yabụ na ị nọ maka abalị epic. Nkume Rock n’uwa niile, nwee ụlọ ọgbakọ Yuyintang na ndepụta klọb kacha mma ha nwere maka nke ikpeazụ 10 afọ. Ya mere, ọ nwere ike ọ gaghị enwe ihu ọhụụ kachasị mma, mana ụda na vibes ga-eme ka ị kwụọ.
9. Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa: Felsenreitschule Na Salzburg, Austria
Mgbe ị na-agba akwụkwọ tiketi maka Ememe Salzburg, ebe ha gbara theda egwu – ị nwere ike ijide n’aka na ebe egwu a dị ịtụnanya. The Felsenreitschule bụ nnukwu ụlọ nzukọ egwu egwu, na 96 Arcades n'azụ ogbo.
N'oge egwu egwu, a na-agbanye agba arcades ndị nwere mgbidi, na-adọrọ ndị na-ege ntị aka karịa. N'agbanyeghị ụdị egwu ị chọrọ, ihe ngosi na Austrian Felsenreitschule bụ ihe omume maka uche niile – kpomkwem ka egwu kwesiri isi metuta ma metuta ya.
10. Thelọ ihe nkiri oge ochie na Taormina, Italy
Na-ele anya n'ụsọ oké osimiri Calabrian, ihe mgbe ochie nkiri na Taormina wuru ndị Greek gburugburu 3 narị afọ nke BC. Ebumnuche nke ihe nkiri ahụ dị egwu bụ ihe ngosi dị egwu.
Na ume echiche nke oké osimiri na ala, ị ga-ahụ nke a otu n’ime egwu egwu kachasị ịtụ egwu n’ụwa. Ya mere, nwere ọnụ ụlọ maka ndị otu egwu, dancers, ndị na-abụ abụ, ị ga - ahụ na ụlọ ihe nkiri mgbe ochie a bụ ebe dị egwu maka ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ọhụụ gafere egwu egwu.
11. Olọ Ndụ Mao Na Shanghai
Site na eletriki na pop tunes, Mao Livehouse bụ ebe egwu kachasị na Shanghai. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe kachasị mma na ndụ abalị Shanghai na egwu egwu, mgbe ahụ Mao Livehouse bụ ebe IT maka ndị bi na ndị njem.
Mao Livehouse nwere usoro ụda kacha mma na China, na-eme ya ebe kachasị mma egwu egwu, na ebe ikpu isi gi na nkpatu.
12. Ebe Kachasị Mma Egwu N’uwa: Anlọ ihe nkiri oge ochie dị na oroma, France
Theaterlọ ihe nkiri ndị Rome dị na oroma na-atọ ndị na-akụ egwu ụtọ kemgbe narị afọ mbụ AD. Emi odude ke obio Orange, na-akwado egwuregwu, na ememme oge opupu ihe ubi a na-eme kwa afọ na France.
I nwere ike ịbụ otu n'ime 10,000 ndị mmadụ na-anụ ụtọ egwu a na-agaghị echefu echefu na ụlọ ihe nkiri kacha mma na Europe. Theaterlọ ihe nkiri oroma bụ a ụgbọ okporo ígwè pụọ nke Marseille, ma obere ụgbọ okporo ígwè njem ga-eweghachi gị na akụkọ ihe mere eme, ka oge Rome, na nke oma ihe ngosi di egwu na uwa egwu.
na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka Akpara gị egwu ezumike ka 12 kasị mma music venues na ụwa ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “12 Best Music venues In The World” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Digየሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ma ị nwere ike ịgbanwe / ja ka / ru ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.